Karli Dress-PDF Ukuthunga Iphethini - The Tailoress
Ikhaya / Abesifazane / izingubo / Karli Dress-PDF Ukuthunga Iphethini
Uma inkokhelo yakho kuqediwe, imizuzwana lapho Ngokwejwayelekile kuthatha isikhathi esingamasonto ambalwa nje, you will be redirected back to The Tailoress® where you can view your order in I-akhawunti yami (uma kakade kwadingeka eyodwa noma wakhetha ukudala eyodwa ku-checkout). Kusuka ku-akhawunti endaweni yakho ungase futhi ukulanda amafayela akho. Lapho yokukhokha Uzophinda uthole isaziso se-imeyili ukukwazisa imininingwane oda yakho maduze kulandele enye i-imeyili equkethe isixhumanisi sokulanda yakho.
PayPal indlela ephephile of ukuthenga nge-inthanethi. Awudingi akhawunti ye-Paypal ukuthenga kusuka ku-The Tailoress®. Find out more about Paypal here.
Categories: izingubo, Abesifazane
Sicela ubuke PRODUCT TUTORIAL LINK here or click the tab below to open it in this page.
usayizi Copyshop: 61cm X 69cm